Conferences ကများနှင့်အဖွဲ့ - အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ Conferences ကများနှင့်အဖွဲ့
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့်လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေများမှပြintroducedနာများအားပိုမိုသိရှိလာစေရန်ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ဖရင့်များနှင့်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ သင်ကြားခြင်းနှင့်အစိုးရနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းတို့တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာကို The Reward Foundation မှမည်သည့်နေရာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းသတင်းများဖြင့်ဖော်ပြသည်။
2020 အတွက် TRF
8 ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 ။ မာရိ Sharpe အပေါ်တစ် ဦး session တစ်ခုတင်ပြခဲ့သည် Porn၊ Brain နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ လန်ဒန်မြို့ရှိလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်မုန်းတီးမှုများကုသမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွင်ပြုလုပ်သည်။
18 ဇွန်လ 2020 ။ မာရိကရှပ်ပေးအပ် ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများမှကလေးများကိုကာကွယ်ရန်နည်းပညာမဟုတ်သောနည်းဗျူဟာများ - ပညာရှင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း Age Verification Virtual Conference မှာ။
23 ဇူလိုင်လ 2020 ။ Darryl Mead ပြောသော CESE Global Summit ပြfutureနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနာဂတ်သုတေသနအတွက်လမ်းပြမြေပုံ.
27 ဇူလိုင်လ 2020 ။ အပေါ် CESE ကို Global ထိပ်သီးအစည်းအဝေး panel ကိုဆွေးနွေးမှု လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်း. Exodus Cry မှလီးလာ Mickelwait နှင့်ရှေ့နေ၊ ပညာပေးနှင့်စာရေးဆရာ Rachael Denhollander တို့နှင့်စကားပြောခဲ့သည်။
28 ဇူလိုင်လ 2020 ။ Mary Sharpe ပြောခဲ့တဲ့ CESE Global Summit အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် Autistic Spectrum Disorders နှင့်အထူးသင်ယူရန်လိုအပ်ချက်များရှိသောအသုံးပြုသူများ.
12 နိုဝင်ဘာလ 2020။ ချုံ့ချဲ့ဆွေးနွေးပါ။ လန်ဒန်၊ The Reward Foundation နှင့် Farrer & Co LLP၊ Mary Sharpe နှင့်စကားပြောဆိုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖုံးကွယ်ရန်ဟောပြောပွဲကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
2019 အတွက် TRF
18 ဇွန်လ 2019 ။ Darryl Mead နှင့် Mary Sharpe တို့ကစာတမ်းကိုတင်ပြခဲ့ကြသည် aligning “ အင်တာနက်ပြသနာများအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာဥရောပသုတေသနကွန်ယက်တစ်ခုအတွက်ပြသခြင်း” ၏မတူကွဲပြားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အတူ ထိခိုက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စားသုံးသူအသိုင်းအဝိုင်း ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြuseနာကိုဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည်ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယိုကိုဟားမားရှိအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတွင်ဖြစ်သည်။ စာရွက်ပေါ်မှာတင်ပေးတယ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းပေါ်တွင်သုတေသနအကြောင်းကိုသင်ကြားရေးကျောင်းမှာကျောင်းသားများ၏စိန်ခေါ်မှုများ။
5 အောက်တိုဘာလ 2019။ Darryl Mead နှင့် Mary Sharpe တို့သည်ဆွေးနွေးမှုကိုသုံးသပ်ခဲ့သည် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနအသစ်တစ်ခု USA မှစိန့်လူးဝစ္စရှိလိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာညီလာခံဖွင့်ပွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်။
2018 အတွက် TRF
7 မတ်လ 2018။ မာရိကရှပ်အပေါ်ပေးအပ် အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု မီးခိုးရောင်ဆဲလ်များနှင့်အကျဉ်းထောင်များတွင် - အားနည်းသောလူငယ်များ၏အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်သိမြင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။ ဒီအခမ်းအနားကို Glasgow ရှိ Strathclyde တက္ကသိုလ်မှလူငယ်များနှင့်လူထုတရားမျှတမှုစင်တာမှထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။
5 နှင့်6ဧပြီလ 2018 ။ ဗာဂျီးနီးယား၊ အမေရိကန်၊ ဗာဂျီးနီးယားရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုဆိုင်ရာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ Darryl Mead မှနောက်ဆုံးသတင်းကိုပေးခဲ့သည် ဗြိတိန်တွင်ညစ်ညမ်းကိစ္စများ နဲ့ Mary ရှပ်အဆိုပါဦးဆောင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး & သုတေသန Task Force အစည်းအဝေး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထက်ပို 80 ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့သည်။
24 ဧပြီလ 2018 ။ TRF တွင်ပူးတွဲစာတမ်းတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည် ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်များမှကျဘာစွဲ၏သိပ္ပံဆက်သွယ် Cologne, ဂျာမနီအတွက်အပြုအမူစွဲပေါ်တွင် 5th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံမှာ။
7 ဇွန်လ 2018 ။ မာရိကရှပ်အပေါ်လူထုဟောပြောပွဲကိုအပ် အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က Lucy ကို Cavendish ကကောလိပ်မှာ။
3 ဇူလိုင်လ 2018 ။ မာရိကရှပ်လန်ဒန်အပေါ်တစ်ဦး conference မှာညစ်ညမ်းအပေါ်တစ်ဦးတင်ဆက်မှုကိုအပ် ကျောင်းများရှိကလေးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်နှောက်ယှက် Denormalising: တစ်ဆိုနိုင်ပါတယ် Multi-Agency ကတုံ့ပြန်မှုရေးဆွဲရာတွင်.
5 အောက်တိုဘာလ 2018 ။ TRF စာတမ်းကိုတင်ပြခဲ့သည် “ ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ကျန်းမာသောလိင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပံ့ပိုးပေးခြင်း”အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေရှိလိင်ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာညီလာခံသို့တက်ရောက်သည်။
2017 အတွက် TRF
20 ဖေဖော်ဝါရီလ 22 မှ 2017 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead ဣသရေလအမျိုး၌ဟိုင်ဖာမှာအပြုအမူစွဲပေါ်တွင် 4th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒီကွန်ဖရမှာစာတမ်းများအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာဂျာနယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့် compulsive အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
2 မတ်လ 2017 ။ TRF ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်အန်း Darling 650 ကလူတစ်ဦးစုစုပေါင်းပရိသတ်ကိုရောက်ရှိသည်ပါ့ပြဇာတ်ရုံအစီအစဉ် TRF ပစ္စည်းသုံးအစည်းအဝေးများပေးအပ်သည်။
19 စက်တင်ဘာလ 2017 ။ မာရိကရှပ်ကိုခေါ်အကြီးတန်းကျောင်းသားများနှင့်မိဘများကတစ်ဦးဆွေးနွေးချက်တင်ပြ အဘယ်ကြောင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဂရုစိုက် Edinburgh ရှိ George Watson's College မှအကြံဥာဏ်ပွဲတော်အတွက်ဖြစ်သည်။
7 အောက်တိုဘာလ 2017 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead ပေးအပ် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၊ မိဘများ၊ ဆရာများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသိထားရန်လိုအပ်သည် မှာ ရပ်ရွာနေ့ Salt Lake City, USA တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးညီလာခံ၏တိုးများအတွက် Society ၏။
13 အောက်တိုဘာလ 2017 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead ပေးအပ် မြီးကောင်ပေါက်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု အဆိုပါ Edinburgh Medico-chirurgical Society ကရန်။
21 အောက်တိုဘာလ 2017 ။ Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှခရိုအေးရှား၊ Zagreb ရှိမိသားစုဆိုင်ရာတတိယအကြိမ်မြောက်ညီလာခံတွင်ပို့ချချက်နှစ်ခုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်။
16 နိုဝင်ဘာလ 2017 ။ TRF Edinburgh တွင်ညနေခင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုဦးဆောင် porn ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သေ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်အပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု.
2016 အတွက် TRF
18 နှင့် 19 ဧပြီလ 2016 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပေးအပ် “ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုကိုပေါင်းစည်းထားသည့်ချဉ်းကပ်မှု” Stirling အတွက်ချိုးဖောက်မှုများကုသမှု (NOTA) စကော့တလန်ညီလာခံများအတွက်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှာ။
28 ဧပြီလ 2016 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead စက္ကူပေးအပ် "အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်" လန်ဒန်ရှိ onlinePROTECT ညီလာခံတွင်“ ဒါအွန်လိုင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?” - လူငယ်များနှင့်အင်တာနက် - လိင်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းမှစိန်ခေါ်သည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအထိ။ ။ ညီလာခံမှ Mary Sharpe ၏အိမ်သို့ယူဆောင်လာသည့်ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျမှာဖြစ်သည် ဒီမှာ.
4 မေလ 2016 ။ ကျနော်တို့အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီအတွက်နည်းပညာစွဲ၏တတိယအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Congress မှာနှစ်ခုစာတမ်းများကိုပေးအပ်သည်။ မာရိကရှပ်အပေါ်ပြောသော “ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲခြင်းကိုကာကွယ်ရန်မဟာဗျူဟာများ” နှင့် Darryl Mead အကြောင်းကိုပြောဆိုသော “ လူငယ်များသည်အန္တရာယ်များကိုစားသုံးသူများအဖြစ်ရင်ဆိုင်ကြရသည်”။ ပိုရှည်သော Darryl ၏ဟောပြောချက်ကိုနောက်ပိုင်းတွင်ရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့် Addicta ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် ဒီမှာ.
17-19 ဇွန်လ 2016 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead အမည်ရစက္ကူပေးအပ် “ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများကိုသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲသူများအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ” လူမှုရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာသုတေသနဆိုင်ရာ DGSS ညီလာခံ၊ ဂျာမနီ၊ မြူးနစ်မြို့ရှိ“ လိင်အဖြစ်ကုန်သွယ်ခြင်း”
7 စက်တင်ဘာလ 2016 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead အပေါ်စက္ကူကိုအပ် “ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုလူထုကျန်းမာရေးပြasနာအဖြစ်ဖော်ထုတ်ရန်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်း” Glasgow အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာသုတေသနညီလာခံ (ISIRC 2016) ညီလာခံမှာ။ ဒီကွန်ဖရအပေါ်တစ်ဦးကသတင်းပုံပြင်ဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တင်ပြချက်ကို ISIRC ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရရှိနိုင်သည်
23 စက်တင်ဘာလ 2016 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead တစ်ဦးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအပေါ်ပေးအပ် “ အင်တာနက်အပြာစာပေ၏ပြိုကွဲစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှု” Austin, Texas ပြည်နယ်အတွက်လိင်ကျန်းမာရေးညီလာခံ၏တိုးများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ။ ဒီအပေါ်တစ်ဦးကသတင်းပုံပြင်ပုံပေါ် ဒီမှာ။ အဆိုပါတင်ပြချက်တစ်ခုအသံဖမ်းမှဒေါင်းလုပ်များအတွက်ရရှိနိုင် ခါးပန်းက်ဘ်ဆိုက် အမေရိကန် $ 10.00 တစ်တာဝန်ခံများအတွက်။ ဒါဟာအမိန့်ပုံစံပေါ်တွင်နံပါတ် 34 ဖြစ်ပါတယ်။
29 စက်တင်ဘာလ 2016 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead အပေါ်စက္ကူကိုအပ် "ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြားအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု: လတ်တလောနိုင်ငံတကာသုတေသနတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း" Brighton အတွက် NOTA အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံမှာ။ မြင် NOTA အဆိုပါကွန်ဖရ၏အသေးစိတျအဘို့။ အဆိုပါကွန်ဖရပေါ်မှာငါတို့အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ.
25 အောက်တိုဘာလ 2016 ။ မာရိကရှပ်ပေးအပ် “ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်” Edinburgh ရှိကလေးများနှင့်လူငယ်များအတွက်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးမှာ Holyrood Events မှတင်ဆက်ထားပါသည်။ ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာသည်။
29 နိုဝင်ဘာလ 2016 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead မှာပြောသော “ ကျောင်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု”ပေါ်လစီ Hub Scotland မှ Edinburgh တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခု။ အဖြစ်အပျက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ.